အချစ်ရေး Archives - Page2of 13 -
တစ်ဘဝလုံးစာရည်ရွယ်ထားတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲတွေသာဖြတ်ကျော်နိုင်မဲ့ အချစ်ရဲ့အဆင့် ( ၅ ) ဆင့်
တစ်ဘဝလုံးစာရည်ရွယ်ထားတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲတွေသာဖြတ်ကျော်နိုင်မဲ့ အချစ်ရဲ့အဆင့် ( ၅ ) ဆင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်ဟာ ကုသခြင်းထက်ကောင်းတယ်ဆိုတာကြားဖူးပါလိမ့်မယ်။ စုံတွဲတွေမှာ များသော အားဖြင့် တစ်ယောက်ကထိခိုက်လွယ်တတ်ပြီး အဲ့ဒီအတွက်သင်ပြင်ဆင်ထားသင့်တဲ့အရာတွေကို မြင်နိုင်အောင် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်နော် … အဆင့် ၁ – လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်အချစ် သင့်ရဲ့နံရိုးလေးကို ရရှိလိုက်တဲ့ခဏလေးအတွင်းမှာ အားလုံးဟာ ပျားရည်လိုချိုမြနေတယ်။ ချစ်သူလေးကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာ လိပ်ပြာလေးတွေဝဲနေပြီး အနမ်းလေးတွေ၊ အထိအတွေ့လေးတွေအကုန်လုံးဟာ အရူးအမူးဖြစ်စေတယ်။ မိနစ်တိုင်းသူ့ဆီကမက်ဆေ့လေးတွေမျှော်နေမိတယ်။ နဲနဲရူးကြောင်ကြောင်နိုင်ပေမဲ့ ဘယ်သူ့ဂရုစိုက်ရမှာလဲ၊ အချစ်မှာလူတိုင်းရူးကြတာပဲ။ အဲ့လိုတွေ ခံစားနေရတယ်ဆိုရင် သင်ဟာ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် အချစ်တစ်ခုရှိနေတာ သေချာပါတယ် …။ အခုခံစားနေရတာလေးကို မှတ်ထားလိုက်ပါ။ နောက်ကျရင် ဒီအမှတ်တရလေးတွေနဲ့ အချစ်ကို ပြန်လည်လန်းဆန်းအောင် လုပ်နိုင်အောင်လို့ပါ …။ အဆင့် …
မင်းကို အဖက်မလုပ်တဲ့ လူကိုမှ နှလုံးသားထဲထည့်ထားရတာ မပင်ပန်းဘူးလား
မင်းကို အဖက်မလုပ်တဲ့ လူကိုမှ နှလုံးသားထဲထည့်ထားရတာ မပင်ပန်းဘူးလား သူ့စိတ်ထဲမှာ မင်းကို ရှိတယ်လို့တောင် သတ်မှတ်မထားထားတဲ့ လူကိုမှ အတွေးထဲမှာ ထည့်ထားရတာ မပင်ပန်းဘူးလား …? အဖက်မလုပ်တဲ့ လူကိုမှ နှလုံးသားထဲထည့်ထားရတာ မွန်းကြပ်ပြီး ပူလောင်မနေဘူးလား …? မင်းကိုယ်မင်း သနားညှာတာ သင့်ပါပြီ …။ သူ့စိတ်နဲ့ ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့ ချိန်တွေကို လက်ချိုးရေတွက်ကြည့်ပါအုံးလား …၊ စားလည်း ဒီစိတ် သွားလည်း ဒီစိတ်နဲ့ မင်းဘဝရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကို အဲ့ဒီစိတ်အောက်မှာပဲ ကုန်ဆုံးစေတော့မှာလား အဲ့ဒီ ခံစားချက်က မင်းတစ်ယောက်ထဲ ခံစားဖူးတာမှ မဟုတ်တာကွာ လူတိုင်းခံစားဖူးတာပေါ့ …။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းတော့ မင်းလို ဖြစ်မနေဘူး အရမ်းကြီး စွဲလမ်းပြီး …
ရှားပါးစာရင်းဝင် ချစ်သူလက္ခဏာ (၅) မျိုး အချစ်စစ် ဆိုတာ တဖြည်းဖြည်း ရှားပါး လာတာနဲ့ အမျှ သင့်ကို စိတ်ရင်းအမှန်နဲ့ ချစ်တဲ့သူ၊ ဘာအကျိုးကိုမှ မမျှော်ကိုးပဲချစ်တဲ့သူ၊ သစ္စာရှိရှိ ချစ်တဲ့သူဆိုတာ တကယ်ကို ရှားပါးလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ခုဖော်ပြတဲ့ အချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီနေတဲ့ ချစ်သူ မျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားရတယ် ဆိုရင်တော့ သင်ဟာအရမ်းကို ကံကောင်းတာကြောင့် လက်လွှတ်မခံပါနဲ့လို့ ပြောပါရစေ …။ (၁) သင့်ဆီက ဘာမှမမက်မောဘူး ဒီလို မိန်းကလေး မျိုးဟာ သင့်ရဲ့ နောက်ကြောင်းတွေ၊ ကျောထောက်နောက်ခံတွေ၊ သင့်ရဲ့ဂုဏ်တွေ၊ ငွေကြေးချမ်းသာမှုတွေကို စိတ်မဝင်စားတဲ့ သူပါ …။ သူ့စိတ်ထဲမှာ သင့်ကိုသင်လို့ပဲ မြင်ပြီး …
အဆင်မပြေတဲ့အချစ်ရေးကို မိန်းကလေးအများစု လက်မလွှတ်နိုင်ကြတဲ့ အကြောင်းအရင်း(၄)ချက်
အဆင်မပြေတဲ့အချစ်ရေးကို မိန်းကလေးအများစု လက်မလွှတ်နိုင်ကြတဲ့ အကြောင်းအရင်း(၄)ချက် မိန်းကလေးတွေဟာ တကယ်ချစ်သွားပြီဆိုရင် သူတို့ချစ်တဲ့သူက ဘယ်လောက်ဆိုးတဲ့သူဖြစ်ဖြစ် လွယ်လွယ်နဲ့လက်တွဲမဖြုတ်တတ်၊ ကျောမခိုင်းတတ်ကြပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုစိတ်ဆင်းရဲစေတဲ့အချစ်ရေးကို စိတ်ညစ်ခံပြီး ဖက်တွယ်ထားတတ်ကြပါတယ်။ မိန်းကလေးအများစု ဘာလို့များ ကိုယ့်အတွက်မကောင်းတဲ့အချစ်ရေးကိုလက်မလွှတ်ဘဲ ရှေ့ဆက်နေတာလဲဆိုတော့ ဒီအကြောင်းရင်းတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်နော် … (၁) အထီးကျန်မှာကြောက်လို့ မိန်းကလေးတိုင်းက အထီးကျန်မှာကြောက်လို့ အဆင်မပြေတဲ့အချစ်ရေးကို ရှေ့ဆက်ကြတာမဟုတ်ပေမယ့် အများစုကတော့ ဒီချစ်သူနဲ့ပြတ်ပြီးရင် အထီးကျန်ရမှာကိုကြောက်လို့ စိတ်ဆင်းရဲခံပြီး ဆက်တွဲနေကြတာပါတဲ့ …။ (၂) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုလျော့နည်းနေလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေက ဒီချစ်သူနဲ့ပြတ်သွားလည်း ကိုယ်အဆင်ပြေအောင်နေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆင်ပြေအောင် ဘယ်လိုနေရမလဲကောင်းကောင်းသိတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ဒုက္ခပေးတဲ့ချစ်သူကိုဖြတ်ဖို့ ဝန်မလေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုလျော့နည်းနေတဲ့မိန်းကလေးတွေကတော့ ဒီချစ်သူနဲ့ပြတ်ပြီးရင် ကိုယ်အဆင်ပြေပါ့မလားဆိုတာ မသေချာဘူး။ ကိုယ်အဆင်ပြေအောင်ဘယ်လိုနေရမလဲမသိဘူး။ ဒါကြောင့် …
ချစ်သူရည်းစားတွေ ဘယ်အချိန်မှာ အဆင်မပြေမှုတွေ ဖြစ်တတ်လဲ?
ချစ်သူရည်းစားတွေ ဘယ်အချိန်မှာ အဆင်မပြေမှုတွေ ဖြစ်တတ်လဲ? သမီးရည်းစား ချစ်သူစုံတွဲတွေရဲ့ အဆင်မပြေမှု၊ သံသယ၊ စိတ်အလိုမကျမှု၊ နားလည် မပေးနိုင်မှု၊ ကတောက်ကဆတွေက ဘယ်လို အချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်လဲ သိလား …? ထပ်တူ မကျမှုကနေ စပြီး ဖြစ်ပေါ် လာတတ်ပါတယ် …။ တယောက်ကို တယောက်လည်း ချစ်တယ်။ ကွယ်ရာမှာ ဖောက်ပြန်နေတာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အပေါ် သူချစ်တဲ့ပုံကို ကိုယ့်ဘက်က အားမလို အားမရဖြစ်တယ် မကျေနပ်နိုင်ဘူး မတင်းတိမ်နိုင်ဘူး။ အဓိကက တယောက်အပေါ် တယောက် ချစ်တဲ့ ပမာဏချင်း ထပ်တူမကျလို့ပဲ။ တနည်းအားဖြင့် အချစ်က တကယ့် life မှာ ဘယ်လောက် အရေးပါသလဲ …
ချစ်သူ၊ဇနီးမောင်နှံတွေ ဘ၀ဆက်တိုင်း အတူတူဆုံနိုင်မယ့် ကုသိုလ်
ချစ်သူ၊ဇနီးမောင်နှံတွေ ဘ၀ဆက်တိုင်း အတူတူဆုံနိုင်မယ့် ကုသိုလ် ဘ၀တိုင်း ဆုံချင်လျှင် အခါတပါး၌ မြတ်စွာဘုရားသည် ဘဂ္ဂတိုင်း သုသုမာရဂိရိမြို့တွင် သီတင်းသုံးတော်မူစဉ် နကုလပိတာ နကုလမာတာ အမည်ရှိသော သူကြွယ် ဇနီးမောင်နှံအိမ်သို့ ကြွတော်မူသည်၊ သူကြွယ် ဇနီးမောင်နှံတို့သည် မြတ်စွာဘုရားအား ရိုသေစွာရှိခိုးလျက် သင့်လျော်သောနေရာ၌ ထိုင်နေကြပြီးလျှင် နကုလပိတာ သူကြွယ်က ဤသို့လျှောက်သည် … မြတ်စွာဘုရား တပည့်တော်သည် အသက်ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင် ငယ်ရွယ်သူဖြစ်သော နကုလမာတာနှင့် လက်ထပ်ခဲ့ပါသည်၊ လက်ထပ်သည့်အချိန်ကစ၍ယနေ့အထိ နကုလမာတာကို ကျော်လွန်ပြီး အခြားသော မိန်းမများထံ စိတ်ရောက်ဖူးသည်ဟု တခါမျှ မရှိခဲ့ဘူးပါ ။ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်မှုကား ဆိုဖွယ်ရာပင် မရှိတော့ပါ ။ မြတ်စွာဘုရား တပည့်တော်တို့သည် ယခုဘ၀၌လည်း …
အချိန်ကြာကြာ မတွဲဖြစ်ကြဘဲ ပြတ်စဲသွားကြတာ ဒါတွေကြောင့်ပါ…
အချိန်ကြာကြာ မတွဲဖြစ်ကြဘဲ ပြတ်စဲသွားကြတာ ဒါတွေကြောင့်ပါ… ဘယ်လောက်ပဲ ကြံ့ခိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါစေ အချစ်မပါတဲ့ဘဝကြီးက တခါတလေတော့ အထီးကျန်စေမှာပါ။ လူတိုင်း လူတိုင်းက ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့အတူ နေ့ရက်တိုင်းမှာ အမျိုးစုံသောချစ်ခြင်းတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းနေကြပါတယ် …။ မိသားစုအချစ်၊ သူငယ်ချင်းအချစ်၊ ချစ်သူရည်းစားအချစ် အစရှိသဖြင့် ချစ်ခြင်းတွေထဲကမှ ချစ်သူရည်းစားအချစ်အကြောင်းကို အဓိကထားပြီး ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော် …။ ချစ်သူအတွဲ တော်တော်များများက အချိန်ကြာကြာ မတွဲဖြစ်တတ်ကြဘဲ ပြတ်စဲသွားကြတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ တချို့တွေကရော ဘာလို့ အကြာကြီး တွဲဖြစ်သွားတာလဲ …? ဆိုတော့ကား ကိုယ့်ရဲ့ Relationship ကို အဆင်ပြေပြေ နဲ့ ရေရှည်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ ဒီအချက်တွေကို လိုက်နာသင့်ပါတယ် …။ ၁။ နှလုံးသားထဲက ချစ်လွန်းလို့ အတူတူရှိချင်တာ …
အချစ်ရေးမှာ သင်ဟာအလွန်ကံကောင်းတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်ခဲ့ရင် ဒီလိုလေးတွေ အချစ်ခံရမှာပါ
အချစ်ရေးမှာ သင်ဟာအလွန်ကံကောင်းတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်ခဲ့ရင် ဒီလိုလေးတွေ အချစ်ခံရမှာပါ မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ ရင်ထဲက ဆန္ဒလေးတစ်ခုကတော့ အချစ်ရေးမှာ ကံကောင်းချင်တာပါပဲ။ ချစ်သူက ရူးရူးမူးမူးစွဲစွဲလန်းလန်း ချစ်တာကိုပဲ ခံချင်ကြသူတွေပါ။ဒီလိုဆန္ဒလေးကို ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ ချစ်သူနဲ့ ဆုံခွင့်ရတဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ အနည်းစုပဲဖြစ်ပြီး အချစ်ရေးမှာ အလွန်ကံကောင်းကြသူလေးတွေအဖြစ် သူများတွေရဲ့အားကျခြင်းကို ခံရသူတွေပါ။ အချစ်ရေးမှာ အလွန်ကံကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ ဘယ်လိုအချစ်ခံရလဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးလိုက်တယ်။တကယ်လို့သင်ဟာ ဒီလိုအချစ်ခံရသူ တစ်ယောက်ဆိုရင် သင့်ကို ကံအကောင်းဆုံး မိန်းကလေးဖြစ်စေခဲ့တဲ့ သင့်ချစ်သူကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောလိုက်ပါအုံးနော် … (1) စိတ်ရှည်ပေးတယ် အချစ်ရေးမှာ ကံကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးတွေဆိုတာ ကိုယ့်အပေါ်ကို စိတ်ရှည်တဲ့သူမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။တစ်ခါတလေ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဘာကိုဒေါသထွက်လို့ ထွက်မှန်းတောင်မသိပဲ သူ့ကိုသွားရစ်တဲ့ အခါမျိုးမှာတောင် စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ …
ဒီအချက်တွေကိုကြည့်ပြီး သင်သူ့ကိုချစ်မိနေပြီလားဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်….
ဒီအချက်တွေကိုကြည့်ပြီး သင်သူ့ကိုချစ်မိနေပြီလားဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်…. လူတွေဟာ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ချစ်မိသွားတဲ့အခါမှာ သူတို့ရဲ့ အပြုအမူတွေဟာ သူတို့သတိမထားမိတဲ့အချိန်မှာပဲ ထူးထူးဆန်းဆန်းကို ပြုမူနေတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ လူတိုင်းလိုလိုဖြစ်တတ်တဲ့အရာဖြစ်ပြီး ကိုယ်ချစ်တဲ့သူရှေ့ကိုရောက်မှသာ ဒီလိုအမူအရာတွေက ပေါ်လာတတ်တာပါ။ ကဲ လူတွေဟာ အချစ်မှာကျရှုံးသွားတဲ့အခါ ဘယ်လိုထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ ပြုမူတတ်ကြလဲ ? ကြည့်လိုက်ရအောင်…. (၁) စကားပြောတဲ့ အသံပြောင်းလဲသွားတတ်တယ် တကယ်နော် ကိုယ်သဘောကျတဲ့လူရှေ့ကိုရောက်ရင် ကိုယ်အသံဟာ သာမာန်ထက်ပိုကျယ်လာတာမျိုး ကြုံဖူးကြတယ် ဟုတ်။ ဒီလိုမျိုးပဲ တစ်ချို့တွေရဲ့ စကားပြောသံတွေက တစ်ခြားပုံစံတစ်မျိုးကို ပြောင်းလဲသွားတတ်ပါတယ်။ ပညာရှင်တွေရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ အမျိုးသမီးတွေဟာ သူတို့ချစ်သူနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာ သာမာန်ထက်အသံလျော့သွားတတ်ကြပြီး ယောကျာ်းလေးတွေကတော့ သာမာန်ထက် အသံပို ကျယ်လာတတ်ကြပါတယ်တဲ့ …။ (၂) အမူအရာတွေ ပြောင်းလဲနေတတ်တယ် …
မိန်းကလေးတစ်ယောက် ပြောင်းလဲသွားမှ သစ္စာမရှိဘူးဆိုတဲ့စကား ကြုံရာလူနဲ့ လက်ဆောင်မပါးပါနဲ့
မိန်းကလေးတစ်ယောက် ပြောင်းလဲသွားမှ သစ္စာမရှိဘူးဆိုတဲ့စကား ကြုံရာလူနဲ့ လက်ဆောင်မပါးပါနဲ့ မိန်းကလေးတွေ လိုချင်တာ ငွေကြေးချမ်းသာမှု မဟုတ်ပါ ဘူး … ။ သူတို့ဘဝကို နားလည်ပေးနိုင်သူရယ် လုံခြုံမှု ပေးနိုင်သူရယ်ပါ မိန်းကလေးဆိုတာ အလိုလိုနေရင်း အားငယ်တတ်သူတွေပါ … ။ အဆင်မပြေချိန် စိတ်အားငယ်ရချိန်တွေမှာ သူတို့ ရင်ဖွင့်ချင်တာ သူတို့ ငိုကြွေးချင်တာ ချစ်သူ ရင်ခွင်မှာပါ … ။ ဒါပေမယ့် ယောက်ျားလေး အများစုက ချစ်တယ်လို့ ပြောပြီးရင် ပြီးသွားပြီ တော်ရုံ ဂရုမစိုက်တတ်ကြဘူး စိတ်မရှည်တတ်ကြဘူး မအားဘူးဆိုတဲ့ စကားက သူတို့ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်ပါပဲ … ။ ဂရုစိုက်မှုမရှိရင် အချစ်က အလကားပဲလေ ချစ်တယ်ပြောပြီး …
This Month : 46501
Total Users : 395717
Total views : 1426769